खेल पोशाक, सुरक्षा ज्याकेट, टी शर्ट्स, प्याडेड भिष्ट - नेमि।
सँधै ध्यान केन्द्रित गर्दै: गुण, विश्वसनीयता, सेवा।
स्वेटशर्ट र हडिज
बच्चा र शिशु पोशाक
टाई डाई पुलओवर हूडी
फुटबल प्रशिक्षण सुट
फुटबल टीम लगाउनुहुन्छ
सोकर जर्सी र शर्ट्स
BSCI प्रमाणित, डिजाइन र निर्माण मा विशेषज्ञता विभिन्न खेल पोशाक, फुर्सत लगाउने काम पोशाक, bespoke सेवामा आधारित आउटडोर कपडा। तपाईंको पोशाकलाई विशिष्ट बनाउन, हामी विभिन्न रेशम स्क्रिन प्रिन्ट, एम्बोसिंग, उच्च बनाने की क्रिया, गर्मी ट्रान्सफर प्रिन्ट, कढ़ाई र अधिक गर्न सक्दछौं। हाम्रो कपडा प्रीमियम गुणवत्ता र कार्यात्मक सम्पत्ति को हो।
हामी केवल प्रीमियम गुणवत्ता परिधान मात्र प्रदान गर्दैनौं, तर ध्यान दिएका ग्राहक सेवा पनि। हाम्रो उद्यम संस्कृति ध्यान केन्द्रित गर्दै छ: गुणस्तर, विश्वसनीयता, सेवा।
हामीसँग उत्कृष्ट कारीगरी प्रदान गर्न दक्ष श्रमिकहरू छन्।
हाम्रो कारखाना BSCI प्रमाणित, कोका कोला अडिट गरिएको, ISO9001 प्रबन्धन प्रणाली लागू गर्दैछ। कपडा OEKO-TEX100, ब्लूसिग्न, द्वारा प्रमाणित छ, ग्लोबल रीसाइक्ड मानक 4.0.० लाई अनुरूप छ।
वर्ष स्थापना भयो
वर्ग मीटरमा कारखाना आकार
थप जान्न चाहानुहुन्छ?
हामी चीनको उत्तरमा अवस्थित छौं, कम श्रम लागतको साथ र हामी नजिकैको टियांजिन पोर्ट र बेइजि Airport एयरपोर्ट छौं, जसले हामीलाई धेरै सुविधाजनक यातायात सक्षम गर्दछ।
28२०२० / अगस्ट
त्यहाँ कति प्रकारका आकस्मिक कपडा छन्?
फुर्सदको लुगालाई सामान्यतया अवन्त-गार्डेज खेलकुद, मनोरञ्जनात्मक मनोरन्जन, व्यवसायिक मनोरन्जन र ग्रामीण फुर्सतमा विभाजन गर्न सकिन्छ। १. अवन्त गार्डे क्याजुअल पोशाक: अवन्त-गार्डे आकस्मिक पोशाक, फेसन क्याजुअल पोशाक पनि भनिन्छ, लोकप्रिय पुनःप्रवाहको मूलधार हो ...
आउटडोर कपडाको कपडा कसरी छनौट गर्ने?
बाहिरी कपडाका लागि धेरै प्रकारका कपडाहरू छन्। कुन तपाईंको लागि सब भन्दा उपयुक्त छ? बाहिरी कपडाहरूको चयनमा, त्यहाँ छ आवश्यक कार्यहरू छन्। छ वटा सुविधाहरूमा एक नजर राखौं: एयर पारगम्यता प्रति हवाको स्तर ...
हामी तपाइँको निपटानमा कुनै पनि दिन, कुनै पनि समय ...
हामीलाई ईमेल वा कल गर्न स्वतन्त्र हुनुहोस्
फोन: +86 13 १ 133 89 638989 ० 0०3
व्हाट्सएप / वेच्याट: +86 13 १ 133 89 63890००3
हामी सेवा गर्दछौं
हामी खेलकुद क्लबहरू, संघहरू, कलेजहरू, स्टोरहरू, किनमेल केन्द्रहरू, सरकारी संगठन, कर्पोरेशन र व्यक्तिहरू आदि सेवा गर्दछौं।
सबै प्रकारका ब्रान्डहरूबाट OEM र ODM अर्डर लिन्छ। हामी केवल डिजाइन र उत्पादन सेवा मात्र व्यवसाय परामर्श सेवा प्रदान गरिरहेका छौं।
+0086 १33 89 638989 ० 0०3